Tanzania Vonona hahita ny fanombohan'ny fampirantiana isam-paritra voalohany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Tanzania Vonona hahita ny fanombohan'ny fampirantiana isam-paritra voalohany
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Septambra 14, 2021
Tanzania vonona amin'ny fampirantiana fizahan-tany EAC
Mpanoratra Apolinari Tairo - eTN Tanzania
Ny fampirantiana fizahan-tany voalohany sy tovovavy ho an'ireo firenena 6 mpikambana ao amin'ny Community Africa East (EAC) dia kasaina hatao ny volana oktobra ho avy izao. Namboarina izy io mba hisarihana ireo orinasa mpizahatany sy mpanao politika manerana ny faritry ny faritra.
Nomena anarana ho Expo Atsinanana momba ny fizahantany any Atsinanana (EARTE) 2021, ny fampirantiana dia kasaina hisokatra manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 16 Oktobra.
Ny hetsika dia nahasarika mpilalao fizahantany lehibe avy amin'ny fanjakana mpikambana EAC.
Ny EARTE 2021 no fampirantiana isam-paritra voalohany natao tany Afrika Atsinanana, mikendry ny hanangana programa iraisana izay hampivondronana ireo firenena 6 mpikambana hamorona hetsika fizahantany isam-paritra.
Ireo mpandray anjara ao amin'ny EARTE dia misy mpividy sy haino aman-jery iraisam-pirenena nampiantrano izay handray anjara amin'ny fampiharihariana ireo fizahan-tany mpizahatany manan-karena izay misy any Afrika Atsinanana amin'ny fanjakana tsirairay avy.
Ny fampirantiana dia harahin'ny dia fanazaran-tena ho an'ireo mpividy iraisam-pirenena mpampiantrano sy haino aman-jery marobe amin'ireo toerana fizahan-tany malaza ao Tanzania sy EAC izay misy ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina sy ny farihy, ny bibidia, ny hatsarana kanto, ny toerana manan-tantara ary ny lova ara-kolontsaina manan-karena.
Ny lohahevitr'ilay fampirantiana ho avy dia ny "Fampiroboroboana ny fizahan-tany mahomby amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena." Natao ny lohahevitra mba hampahafantarana ny filàna fampandrosoana sy fanavaozana ny sehatry ny fizahantany amin'ny fomba maharitra mba hanalefahana ny fiatraikany amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny valanaretina COVID-19.
Ny faritra EAC dia namoy nanakaiky ny 70 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020, miaraka amin'ny fatiantoka lehibe amin'ny karaman'ny fizahan-tany sy ny asa mifandraika amin'ny fizahantany, hoy izy. ny EAC Sekretera jeneraly, Peter Mathuki. Ny fiarovana ny bibidia any amin'ny faritra dia nijaly mafy tamin'ny areti-mandringana tamin'ny fahaverezan'ny fidiram-bola amin'ny fiarovana, izay ny ankamaroany dia ateraky ny mpizahatany mitsidika ireo faritra arovana sy ireo mpiaro ny bibidia manerana ny faritra.
Ny sehatry ny fizahan-tany dia iray amin'ny sehatra lehibe indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny EAC, noho ny fandraisany anjara amin'ny toekarem-piraisan'ny Firenena mikambana aminy mikasika ny harinkarena faobe (manodidina ny 10%), ny vola azo amin'ny fanondranana (17%), ary ny asa (eo amin'ny 7% eo ho eo ). Ny vokany mihamaro sy ny fifamatorana amin'ireo sehatra hafa izay manampy amin'ny fampidirana azy toy ny fambolena, fitaterana ary ny famokarana dia tena goavana tokoa.
Andininy 115 amin'ny Fifanarahana EAC dia manome fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany, izay iarahan'ny Firenena mikambana miasa mba hamolavola fomba iraisana sy mirindra amin'ny fampiroboroboana sy marketing ny fizahan-tany manara-penitra ho an'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiaraha-monina.
Manokana izy ireo handray anjara amin'ny fandrindrana ny politika eo amin'ny sehatry ny fizahantany, hanara-penitra ny fanasokajiana trano fandraisam-bahiny, ary hamolavola paikady isam-paritra ho fampiroboroboana ny fizahan-tany, izay hanamafisana ny ezaka ataon'ny isam-paritra amin'ny hetsika isam-paritra.
Ny fanjakana mpikambana ao amin'ny EAC dia nampiroborobo ny fizahan-tany isam-paritra amin'ny foibe fizahan-tany iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny World Travel Market (London) sy International Tourism Bourse (ITB) any Berlin.
Ny fampirantiana Fizahan-tany isam-paritra dia horaisin'ny fanjakana Partner mifandimby.
Nandritra ny Fivoriana fanampiny mahazatra natao tamin'ny 15 Jolay 2021, ny filankevitry ny fizarana fizahantany sy ny bibidia dia nanapa-kevitra fa ny Repoblika Mitambatra Tanzania dia tokony hampiantrano ny 1st EAC Regional Tour EXPO any Arusha tamin'ny Oktobra 2021. Ny safidin'ny Arusha - foibem-pizahan-tany any Tanzania ary tanàna safari - dia natao hanamorana ny fidiran'ny mpandray anjara avy amin'ny fanjakana Partner rehetra.
Ny tanjon'ity fampirantiana ity dia ny hampiroborobo ny EAC ho toeran-tokana fizahan-tany, hanome sehatra ho an'ny orinasa mpamatsy tolotra fizahan-tany (B2B), ary hamorona fahatsiarovan-tena amin'ny fizahan-tany.
Ny hetsika dia hisy fampirantiana ataon'ireo mpanome tolotra fizahantany, tambajotra haingam-pandeha ary fivoriana B2B, ary seminera momba ny lohahevitra fizahan-tany sy fizahantany. Mikasika ny sehatry ny fizahan-tany, ireo lohahevitra ireo dia hitodika amin'ireo lafin-javatra toy ny faharetan'ny fizahan-tany sy ny fitantanana ny krizy, ny varotra fizahan-tany dizitaly, ny fampiroboroboana ireo fonosana fizahan-tany marobe, ary ny tombam-bidin'ny fampiasam-bola fizahan-tany.
Etsy ankilany, ny lohahevitra misy ifandraisany amin'ny biby dia ny Combating Poaching sy ny Illegal Wildlife Trade ary ny lanja ara-toekarena ny bibidia ao amin'io faritra io.
Ny tena zava-dehibe ihany koa, ny fampirantiana dia hanamafy ny fizahan-tany intra-rezionaly ankoatry ny fizahan-tany iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fanomezana vokatra fizahan-tany ho an'ny olom-pirenena EAC. Hiorina amin'ny ezaka teo aloha toy ny fanapaha-kevitry ny filankevitry ny minisitra izay manolotra tahan'ny tombam-bidy ho an'ireo olom-pirenena mitsidika toerana fizahan-tany ao amin'ny faritra miaraka amin'ny sanda izay mihatra amin'ny olom-pirenena.
Lehiben'ny birao sy masoivoho afrikanina afrikanina ankehitriny ...
Mitady any amin'ny fiakarana any California rehefa misokatra indray i Etazonia ...
Ny sidina avy any Kazakhstan dia hiverina any amin'ny firenena 16 hafa izao
Olona 41 no maty, am-polony no tsy hita tany India mihotsaka ...
Rohy vaovao hita eo anelanelan'ny Alzheimer sy...
Fiaramanidina Etiopiana: Mankanesa any Enugu, Nizeria izao
Fizahan-tany any Hawaii: mihena ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika Aloha State
Ny coral Vita monina any Bahamas dia mahazo ny printsy manana laza ...
Krakow hampiantrano ny kongresy iraisam-pirenena 2022 sy ...
Brezila Faly amin'ny fivoriana ao amin'ny Expo Dubai 2020
Qatar Airways miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ny bibidia
Sandals Resorts dia manaisotra ny ahiahy amin'ny drafitry ny dia any ...
Fifanarahana famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany sy fialamboly ...
Mamadika ny seranam-piaramanidina ho vola miliara Dolara ...